admin – Page 9 – Shabakadda Amiirnuur
Dhegeyso; Sheekh Fu’aad Maxamad Khalaf oo si qiira leh uga hadlay xad gudubka Nabi Muxamad (SWC) ka dhanka ah.
Iyadoo Caalamul Islaami ay ka socdaan isu soo baxyo ka dhan ah Afglaadada Dowladda Faransiisku u geysatay Nabi Muxamad (SCW) ayaa waxaa xad gudubka faransiiska si qiiro leh uga hadlay Sheekh Fu’aad Maxamad Khalaf oo ka mid ah Culumada Diinta Islaamka. Waxa uu bogaadiyay weerarada ka dhan ah Faransiiska ee […]
Gudoomiye xigeenki Qansax dheere oo la dilay iyo gudoomyaha oo dhaawac ah
Qarax khasaare dhimasho iyo dhaawac leh sababay ayaaMaanta ka dhacay Magaalada Qansaxdheere ee Gobalka Baay waxaana qaraxa fulisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Gudoomiye xigeenkii Maamulka Koofur galbeed ugu magacawnaa Degmada Qansax dheere iyo afar askeri ayaa la xaqiiyay in ay qaraxa ay ku naf waayeen welow ay suura gal tahay in […]
Dhegeyso Barnaamij Gaar Ah: Muhiimadda Adkaarta (01)
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa diyaarisay barnaamij gaar ah oo ay ku eegeyso muhiimadda Adkaarta iyo faa’iidada ay u leedahay nolosheena, waxaana barnaamijkan ka qeyb galaya qaar kamid ah Culimada Diinta Islaamka. hadaba halkaan hoose ka dhegeyso qaybta koowaad Barnaamijka oo ah mid sida ka muuqata juhdi badan la […]
Qaarka mid ah askarta Dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac qarax Maanta Gobalka Galgaduud lagula beegsaday Taliyaha Malateriga Federaalka Janaraal Odawaa Yuusuf Raage. Qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka Dhuuso Marreeb Iyo Guriceel. Odawaa ayaa ka yimid dhanka Dhuuso Marreeb waxaanuu u jeeday dhanka Guriceel waxaana la […]
Ugu yaraantii sadax faransiis kirishtaan ah ayaa dhintay afar kalena waa ay dhaawacmeen ka gadaal markii Maanta Nin dhalinyaro ah oo Muslim ah uu weerar ka fuliyay magaalada Nice ee Dalkaaas waxaana dhaawacmay afar kale. Ninkaan oo ku dhawaaqaya Allaah akbar ayaa tooreyda ku weeraray dadkaan faransiiska ah xilli ay […]
Howlgal ka dhacay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ayay Xarakada Shabaabul Mujaahidiinta ku dishay Nin ka tirsanaa Malateriga Dowladda Federaalka ah oo la oran jiray Cabdi-khadar dilka ayaa ka dhacay Xaafadda Soona keey ee Degmada Hodon ee Magaalada Muqdisho halkaasoo ka mid ah Meelaha ay farisiimaha ku leeyihiin Ciidamada Dowladda […]
Ciidamada Xarakada Alshabaab ayaa xalay weeraro Saf balaaran ah ku qaaday Ciidamada Soomaalida ah ee shisheeyaha wada shaqeynta la leh waxayna ka kala dhaceen weeraradu Gobalada Shabeelaha hoose iyo Jubada hoose. Malateriga Alshababaab waxay beegsadeen Ciidamada Maamulka Jubbaland ee fariisinka ku leh Deegaanka Yoontooy ee duleedka Magaalada Kismaayo. Diryaanka hubka […]
Munaabasad Balaaran oo lagu furayay Masjid weyn ayaa ka dhacday Deegaanka Buur dhuxulle ee Gobalka Gobalka Bakool. Munaasabadda waxaa ka qayb glaay Culumaa u diin hogaamiyaal dhaqan iyo qaarka kale oo ka mid ah qaybaha kale ee Bulshada. Goobta waxaa laga sheegay in dhismaha Masidkaan ku baxday lacag boqolaal kun […]
Howlgalo sarkaal iyo askar lagu dilay oo duleedka muqdisho ka dhacay.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Galabta Duleedka Muqdihso ku dishay Sarkaal ka tirsanaa Maamulka Gobalka Banaadir iyo Askar ka tirsanaa Dowladda Federaalka ah kadib laba howl gala is xigay oo qorshaysan. Ibraahim Cali Coloow oo ahaa Gudoomiye Waaxeed ka tirsan Degmada Kaxda ee Gobalka Banaaadir ayaa lagu dilay inta u dhaxeysa […]
Weeraro khasaare geystay oo Gobalka Baay ka dhacay.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday bar koontarool oo ku taala Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobalka Baay. Qaarka mid ah Ciidamada Maamulka Koofur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka inkastoo aanaan helin tirada rasmiga ah. Dagaalka ayaa ka dhacay Koontaroolka Makunda waxaanuu ku soo aadayaa […]
« Previous 1 … 7 8 9 10 11 … 272 Next »